आइशोलेसन सेन्टर जान्छु भनि हिडेका कोरोना संक्रमित युवक ‘गलफ्रेण्ड’सँग पार्कबाट समातिए ! - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » आइशोलेसन सेन्टर जान्छु भनि हिडेका कोरोना संक्रमित युवक ‘गलफ्रेण्ड’सँग पार्कबाट समातिए !
काठमाडौ । आफूलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै घरबाट निस्किएका एक जना प्रेमीकासँगै पक्राउ परेका छन् । कोरोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै श्रीमतीलाई ढाटेर घरबाट निस्किेका उनी प्रेमिकासहित पक्राउ परेका हुन्।